Ahoana ny Fomba Ahazoana Adobe InDesign Maimaimpoana - Ampidino InDesign Maimaimpoana
Photo Retouching Services > Retouching Blog > Malagasy Blog > InDesign Afaka
By Ann Young, Mathis Ravatomanga 2022-01-16, Malagasy Blog
MAIMAIMPOANA NY INDESIGN
Mitady fomba mety ahazoana maimaimpoana ny InDesign nefa tsy mandika lalàna? Te hampidina maimaimpoana ity rindrambaiko famoahana birao sy mpamoaka an-tserasera ity? Amin'ity lahatsoratra ity dia holazaiko aminao ny fomba fampiasana maimaim-poana InDesign ary koa ny antony tsara kokoa hisorohana ireo kopia piraty. Ankoatr'izay, ho hitanao ny programa 4 maimaim-poana tsara indrindra toa ny InDesign.
Tombony InDesign MAIMAIMPOANA
Fampiharana matihanina miaraka amin'ny valiny tena tsara
Fitaovana an-tserasera miasa
Fitaovana amin'ny famoronana boky ePUB ifandraisana
Printer PDF Passthrough
Mifanaraka amin'ny fampisehoana Mac HiDPI Retina sy ny rafitra Windows HiDPI
Fampidirana tanteraka miaraka amin'i Behance
Mila manome antsipiriany momba ny carte de crédit ve aho mba hitsapana maimaimpoana?
Tsia, tsy manohana an'io politika io i Adobe.
Ohatrinona ny vidin'ny kinova Adobe InDesign feno?
Adobe InDesign tsy misy afa-tsy amin'ny famandrihana. Ny vidiny dia $ 20,99 / volana. Ho fanampin'ilay rindrambaiko, ianao dia hahazo tahiry 100GB an'ny Cloud, Adobe Portfolio, Adobe Fonts ary Adobe Spark miaraka amina endri-javatra premium.
JEREO NY TOKONY MOMBA NY VOLA
Misy ve InDesign tsy misy mpikambana ao amin'ny Creative Cloud?
Tsia, azonao atao ny mampiasa InDesign amin'ny maha-mpikambana ao amin'ny Creative Cloud anao. Misy drafitra roa: Drafitra fampiharana tokana izay misy InDesign ihany na drafitra misy karazana fampiharana. Ny drafitra Creative Cloud dia mety amin'ny mpianatra sy ny mpampianatra, ny endrika, ny mpaka sary, ny fikambanana ary ny orinasa.
Miasa amin'ny MacOS sy Windows ve ny andrana maimaim-poana?
Eny, ity fitsapana open source InDesign ity dia mifanentana amin'ny MacOS sy Windows
Mandra-pahoviana aho no afaka mampiasa ilay fitsarana maimaimpoana?
Azonao atao ny mampiasa ny fitsarana maimaimpoana mandritra ny fito andro amin'ny datin'ny fandefasana voalohany.
Moa ve ny fanandramana maimaim-poana ahitana ny endri-javatra rehetra amin'ny kinova feno?
Eny, manana ny fiasa sy ny fanavaozana rehetra izay ao anatin'ilay kinova InDesign farany teo izy.
Azoko atao ve ny mampiasa ny andrana maimaimpoana amin'ny findaiko?
Tsia, io fitsapana maimaimpoana io dia tsy azo ampiasaina afa-tsy amin'ny solosaina.
Tsy fahatokisan-tena amin'ny fampiasana Pirated InDesign Version
Betsaka ny mpampiasa no tsy tia mandoa ny rindrambaiko fa aleony mitady kinova hacked mandritra ny ora maro na hack azy ireo ihany. Raha ny angom-baovao samihafa, dia hatramin'ny 80% ny rindrambaiko mbola piraty. Ary tsy natao hampiasaina irery ihany izany. Ny governemanta sy ny andrim-panabeazana dia matetika no tratra amin'izany fandikan-dalàna izany. Ho fanampin'ny fandikana lalàna, very be ny tombony azon'ny mpampiasa omena rindrambaiko manana fahazoan-dàlana.
Mividy rindrambaiko fahazoan-dàlana dia tsy manitsakitsaka lalàna isika
Ny fampiasana rindrambaiko tsy manana fahazoan-dàlana dia manitsakitsaka ny zon'ny mpamorona ary mitaky andraikitra amin'ny fitantanana sy ny heloka bevava saika amin'ny firenena rehetra eto an-tany.
Tsy afaka mametraka fanavaozana ianao
Ny rindrambaiko manana fahazoan-dàlana dia manome antoka anao fanavaozana maimaimpoana mandritra ny fotoana voafaritra na tsy voafetra. Tsara ny manamarika fa saika ny rindrambaiko rehetra dia misy lesoka. Indraindray dia tsy azo atao tsotra izao ny mampiasa feno ny endri-javatra raha tsy manamboatra ireo lesoka ireo. Matetika, ny piraty dia mikafika ny kinovan'ny rindrambaiko sasany. Noho izany, tsy misy ny fanavaozana ny programa, izay manakiana indrindra raha mila manamboatra bibikely na manampy endri-javatra vaovao ianao.
UPDATE INDESIGN MAIMAIMPOANA
Amin'ny fividianana rindrambaiko, matetika ianao dia afaka mahazo fanampiana ara-teknika maimaim-poana. Indraindray tsy azo atao ny mametraka tsara ny programa raha tsy misy ny fanampiana ara-teknika.
Ny ampahany amin'ny rindrambaiko mety tsy hita
Rehefa manenjika rindrambaiko, piraty dia manisy fiovana lehibe amin'ny kaody programa, manala ireo tranomboky mpamily sy singa hafa. Tsy miraharaha ireo olana mety hiainan'ny mpampiasa izy ireo, satria tsy hisy fiatraikany amin'ny tombony azony izany.
Ny programa toy ny rindrambaiko Adobe InDesign dia zara raha ampiasaina amin'ny tanjona manokana. Orinasa samy hafa no ampiasain'ny ankamaroany. Rehefa voamarina ny orinasa fa mihaona amin'ny fenitra ISO, ny rindrambaiko manana fahazoan-dàlana dia takiana takiana. Ny fanitsakitsahana ny fepetra takian'ny lalàna momba ny zon'ny mpamorona dia mety hisy fiantraikany ratsy eo amin'ny lazan'ilay orinasa.
4 Safidy InDesign Maimaimpoana maimaim-poana
QuarkXPress dia heverina ho mpifaninana akaiky indrindra amin'ny Adobe InDesign amin'ny famoahana matihanina. Tsy ny rindrambaiko karama ihany fa ny iray lafo vidy. Na izany aza, raha tsy manana vola ampy hividianana fahazoan-dàlana ianao, saingy mila mamorona antontan-taratasy famoahana birao, misy shareware tsara na safidy hafa maimaimpoana amin'ny InDesign sy QuarkXPress.
Mampiasà SCRIBUS MAIMAIMPOANA
Fanamboarana lahatsoratra lalina
Tsy afaka manokatra endrika fisie zanatany DTP hafa
Nozaraina tamin'ny alàlan'ny fahazoan-dàlana GNU, Scribus dia tsy vitan'ny hoe maimaimpoana fa manatsara hatrany ireo mpamorona azy. Amin'izao fotoana izao dia tena mety amin'ny fampiasana matihanina izy io. Scribus dia manana endrika isan-karazany. Raha za-draharaha amin'ny fandaharana ianao dia afaka manoratra script kely, mamorona antontan-taratasy famoahana birao, mamaritra ny loko miloko sns.
Miaraka amin'i Scribus, azonao atao ny manao izay rehetra misy amin'ny rindrambaiko matihanina lafo vidy. Ny interface eto dia azo takarina sy intuitive: ny fisehosehoana fampirantiana sy ny bara fanaovana fitaovana dia azo ahitsy arakaraka ny safidinao manokana mba hanatsarana ny fivezivezenao. Miaraka amin'i Scribus, azonao atao ny mampiditra maodely haingana ho an'ny karazana vala maromaro. InDesign tsy misy an'io endri-javatra io.
Fampidirana miaraka amin'ny banky sary sary
Azo ampiasaina maimaim-poana
Misy ny fampiharana finday
Tsy misy takelaka pejy
Tsy misy fitaovana fampifanarahana
Canva dia heverina ho famolavolana sary kokoa noho ny fampiharana famoahana desktop. Izy io dia tsara ho an'ny famoronana zavatra manahirana sarotra toy ny afisy sy ny flyer. Mora ampiasaina ity rindranasa ity. Ankoatr'izay, manolotra endritsoratra, loko ary sary stock maimaimpoana izy. Ny kinova premium an'ny Canva dia manome fiasa mahaliana kokoa. Na izany aza, ny kinova maimaim-poana dia mihoatra noho ny ampy raha mpampiasa tsy mahazatra ianao.
Canva dia safidy hafa maimaim-poana amin'ny InDesign, saingy tsy afaka mifaninana amin'ity rindrambaiko miavaka ity. Ny mpihaino an'i Canva no kendren'ny mpampiasa dia ireo mpampiasa izay mazàna mamorona sary mahafinaritra sy mahafinaritra. Noho izany, Canva dia analogy mahomby sy mahomby amin'ny mpampiasa amin'ny rindrambaiko famoahana birao mandroso kokoa.
Mampiasà maimaim-poana amin'ny LUCIDPRESS
Fahaizana miasa amin'ny vondrona
Fiarovana rakitra sy fanohanana fiarovana
Tsy misy kinova PC
Safidy voafetra ny maodely maimaim-poana ampiasaina
Raha tsy mampiasa fampiharana famoahana birao matetika ianao dia azonao atao ny manandrana an'i LucidPress. Tsy ilaina ny misintona sy mametraka rindrambaiko amin'ny PC-nao. Afaka manao ny zava-drehetra amin'ny Internet ianao. Mora be ny mampiasa azy raha oharina amin'ireo programa matihanina, noho izany dia hamonjy ny fotoanao ianao. Ny fatiantoka lehibe an'i LucidPress dia ny fampiasa maimaim-poana dia tena voafetra. Noho izany, ny antontan-taratasy tsirairay dia tokony tsy misy pejy mihoatra ny 3. Ankoatr'izay, ny habetsaky ny habaka disk an'ny mpizara dia tsy tokony hihoatra ny 25 MB.
Na eo aza izany, raha te hanandrana famoahana birao ianao na hamorona fanasana hetsika iray dia hankasitraka an'ity rindranasa ity ianao. Na eo aza izany, iray amin'ireo olana fiarovana lehibe indrindra amin'ny famoahana ny birao an-tserasera ny fitehirizana ilay hevitra. Izany no antony, LucidPress dia manana kinova voaloa ho an'ny fampiasana matihanina.
Mampiasà MAIMAIMPOANA VIVADESIGNER
Fanatsarana ny CMYK
Karazan-tsarimihetsika typographic mahery vaika
Mpikirakira teny namboarina
Tsy misy môdely sy loharanom-pahalalana kanto
Viva Designer dia programa voaloa nefa azo alaina ihany koa ao amin'ny Free Edition. Izy io dia mifanaraka amin'ny Windows, Mac OS X ary Linux. Ny Viva Designer Free Edition dia azo ampiasaina amin'ny tanjona manokana sy matihanina. Koa satria maimaim-poana ity kinova ity dia manana fetra vitsivitsy. Raha ampitahaintsika amin'ny InDesign, dia hitantsika fa manana fiasa bebe kokoa ny InDesign. Na izany aza, manana tombony vitsivitsy ny Viva Designer. Ny programa dia tena mpampiasa-namana, na dia ny vao manomboka aza dia hahalala ny fomba hiatrehana ny asany lehibe.
Izy io dia mifanaraka amin'ny Adobe InDesign, MS-Word ary MS-Excel. Ao amin'ny kinova karama, azonao atao aza ny mamorona sy mitahiry antontan-taratasy amin'ny endrika InDesign. Raha mila miasa miaraka amin'ny layout amin'ny iPad ianao dia andramo ny kinova finday maimaimpoana an'ny Quark, izay antsoina hoe "Quark DesignPad".
Sintomy ny InDesign maimaim-poana
Sintomy ny InDesign Editor for Mac / Win
Sintomy ny editor InDesign maimaimpoana hanandramana azy mandritra ny 7 andro. Hankasitrahanao ny interface, ny fanamorana ny fanovana ary ny fitaovana matihanina.
Tombony maimaimpoana InDesign
Adobe InDesign kinova piraty
Safidy 4 maimaim-poana